Football Khabar » बार्सिलोनालाई रोनाल्डोको व्यंग्य !
बार्सिलोनालाई रोनाल्डोको व्यंग्य !
‘मार्सा लिजेन्ड अवार्ड’ थाप्न स्पेन पुगेका इटालियन क्लब युभेन्टस तथा पोर्चुगलका फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोले क्लब बार्सिलोना र उसले च्याम्पियन्स लिग जित्न नसकेको विषयमा टिप्पणी गरेका छन् । गत राति अवार्ड प्रदान गरेपछि ‘मार्सा’सँग विशेष कुराकानी गर्दै उनले बार्सिलोनाले पछिल्ला वर्ष च्याम्पियन्स लिग जित्न नसकेको विषयमा घुमाउरो पारामा व्यंग्य हाने ।
‘मेरो विचारमा बार्सिलोना निकै बलियो टिम हो । यो सिजन उनीहरू डे जोङ, ग्रीजम्यान आएपछि थप बलिया भएका छन् । गत वर्ष पनि उनीहरू कोउटिन्हो, डेम्बेलेको उपस्थितिले बलिया टिम थिए । उनीहरू विश्वका एक उत्कृष्ट टिम हुन्,’ रोनाल्डोले भने ।
त्यसैगरी, रोनाल्डोले आफ्नो पूर्वक्लब रियल मड्रिड पनि बलियो टिम रहेको बताए । ‘अहिले हाजार्ड, जोभिक र मेन्डीको अनुबन्धपछि मड्रिड पनि बलियो बनेको छ,’ रोनाल्डोले थपे ।
रोनाल्डोले युभेन्टसले च्याम्पियन्स लिग जित्ने सम्भावनाबारे पनि भनाइ राखे । ‘यो प्रतियोगिता युभेन्टस, बार्सिलोना, रियल मड्रिड वा अन्य कोही, हरेक वर्ष जित्न चाहन्छन् ,’ रोनाल्डोले भने ।
रोनाल्डोले पछिल्ला पाँच वर्षमा बार्सिलोनाले पैसाको खोलो बगाए पनि च्याम्पियन्स लिग जित्न नसकेको बताए । ‘च्याम्पियन्स लिग जित्न सजिलो छैन । जस्तो किः बार्सिलोनाले पछिल्ला पाँच वर्षमा खेलाडीका लागि पैसाको खोलो बगाए । तर, उनीहरूले च्याम्पियन्स लिग जित्न सकेका छैनन् । यो कति कठिन छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ,’ रोनाल्डोले भने ।
प्रकाशित मिति १४ श्रावण २०७६, मंगलवार १०:४७